Ankaterena sa avy amin'ny fo? - Mana isan andro
-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe « amidio ny fanananao dia izao sy izao avy »!
-Tsy nisy niteny t@ilay vehivavy janga mihitsy hoe « vakio ilay tavoahangy feno menaka dia ataovy @tongotry ny Tompo »!
-Tsy nisy niteny t@ireo olona tsy omby 3000 niova fo mihitsy hoe « tsy maintsy mihaino ny Toritenin’ny Apostoly ISAN’ANDRO, ary tsy maintsy omena ny Apostoly ny 100% (fa tsy 10%) an’ny fananana namidy »!
Fa rehefa babon’ny Tompo ny fo dia manaraka ho azy ny ambiny!
Rehefa tsy babo kosa ny fo dia ilàna fampaherezana sy fandrisihana ary fampanantenàna daholo izay rehetra atao!
Ny fontsika rey olona no ilain’ny Tompo fa tsy ilay ezahanao aseho ivelany iny a! Izany fitafy, toetra, fankatoavana, fanomezana, fitiavana… izany mandeha ho azy fa tsy mila ezahana ary tsy mila lazaina isaky ny mihetsika akory raha tena babony tokoa ny fontsika!
Rehefa tsy babo kosa ilay fo dia tsisy fiantraikany @Tompo na tahaka inona na tahaka inona fiezahantsika! Mino aho fa tadidinao ilay fariseo sy ilay mpamory hetra nivavaka teo an-tempoly (Lioka 18.10)! Ilay fariseo nitanisa ny fahamarinany sy ny fiezahany teo fa tsy nahataitra ny Tompo akory izany!
NY FO ALOHA, manaraka ho azy ny ambiny! Raha tsy mbola babon’ny Tompo ny fonao dia resaho aminy izany dia angataho aminy! Angataho ISAN’ANDRO mihitsy mba ho baboiny! 😉
Dia ho hitanao fa mora ny miaraka aminy fa tsy sarotra izany! Mora ny mankatoa, mora ny mamela heloka, mora ny mahafoy betsaka, mora ny mandefitra na @tsy rariny aza…!
MORA ny ziogany ary MAIVANA ny entany
« Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ ny fanahinareo hianareo.Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. » Matio 11:29-30